Josef Akọwaara Fero Nrọ Ya | Ihe E Ji A Kụziri Ụmụaka Baịbụl
GỤỌ NKE Acholi Afrikaans Albanian American Sign Language Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Basque Bassa (Cameroon) Batak (Dairi) Bicol Bislama Boulou British Sign Language Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitonga (Zimbabwe) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chol Chuabo Cibemba Colombian Sign Language Croatian Czech Dangme Danish Dutch Ecuadorian Sign Language Edo Efik English Estonian Ewe Fijian Finnish Fon French Ga Galician Garifuna Georgian German German Sign Language Greek Guarani Gun Haitian Creole Hausa Herero Hiligaynon Hindi Hmong (White) Hungarian Iban Ibinda Igbo Iloko Indonesian Irish Isoko Italian Italian Sign Language Kabiye Kabuverdianu Kannada Karen (S'gaw) Kazakh Kekchi Kikaonde Kikongo Kikuyu Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kongo Korean Kwangali Kwanyama Latvian Lhukonzo Lingala Lithuanian Lomwe Low German Luganda Luo Macedonian Macua Malagasy Malay Malayalam Mam Marathi Maya Mazatec (Huautla) Mixe Moore Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Ngabere Nias Nigerian Pidgin Norwegian Nyungwe Nzema Okpe Ossetian Otetela Pangasinan Pidgin (Cameroon) Polish Ponapean Portuguese Portuguese (European) Punjabi Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Cuzco) Quiche Quichua (Chimborazo) Quichua (Imbabura) Romanian Russian Samoan Sango Sena Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (South Africa) Setswana Seychelles Creole Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Sunda Swahili Swati Swedish Tagalog Tahitian Tamil Tandroy Tarascan Tatar Telugu Thai Tiv Tojolabal Totonac Tshwa Tsonga Turkish Twi Tzeltal Tzotzil Ukrainian Urhobo Uruund Valencian Venda Vezo Vietnamese Waray-Waray Wayuunaiki Wolaita Xhosa Yoruba Zapotec (Lachiguiri) Zulu
Jehova Echefughị Josef
Mgbe Josef nọ n’ụlọ mkpọrọ, Fero, eze Ijipt rọrọ nrọ mmadụ ọ bụla na-enweghị ike ịkọwa ihe ọ pụtara. Otu n’ime ndị na-ejere ya ozi gwara ya na Josef nwere ike ịkọwara ya ihe nrọ ya pụtara. Fero ziri ozi ozugbo ka a kpọọ Josef.
Mgbe Josef rutere, Fero jụrụ ya, sị: ‘Ì nwere ike ịkọwa ihe nrọ m pụtara?’ Ọ gwara Fero, sị: ‘A ga-enwe nri n’ụba n’Ijipt niile afọ asaa. Afọ asaa ahụ gachaa, a ga-enwekwa ụkọ nri afọ asaa ọzọ. Họrọ onye ma ihe ka o chekwaa nri ka agụụ ghara igbu ndị gị n’oge ahụ a ga-enwe ụkọ nri.’ Fero gwara ya, sị: ‘Ahọrọla m gị. Ị ga-abụ osote m.’ Olee otú Josef si mara ihe nrọ ahụ pụtara? Ọ bụ Jehova mere ka ọ mara ihe ọ pụtara.
Josef ji afọ asaa ahụ e nwere nri n’ụba chekwaa nri. Mgbe afọ asaa ahụ gachara, e nwere ụkọ nri n’ụwa niile otú ahụ Josef kwuru. Ndị mmadụ si n’ebe dị iche iche bịa ka Josef resị ha nri. Mgbe nna ya Jekọb nụrụ na e nwere nri n’Ijipt, o zigara ụmụ ya iri ebe ahụ ka ha gaa zụta nri.
Ụmụ Jekọb bịakwutere Josef ka o resị ha nri. Ozugbo ọ hụrụ ha, ọ matara ha. Ma ha amataghị ya. Ha kpọọrọ ya isiala otú ha mere ná nrọ ahụ ọ rọrọ mgbe ọ ka bụ nwata. Josef chọrọ ịma ma ụmụnne ya hà agbanweela àgwà ọjọọ ha. N’ihi ya, ọ gwara ha, sị: ‘Unu bụ ndị nledo. Unu chọrọ ịma otú ala anyị dị.’ Ha sịrị ya, ‘Mba. Anyị si n’obodo Kenan. Anyị dị ụmụnne iri na abụọ. Otu anwụọla, nke ikpeazụ na nna anyị nọ.’ Josef gwaziri ha, sị: ‘Kpọtaranụ m nwanne unu nke ikpeazụ ahụ, m ga-ekweta ihe unu kwuru.’ N’ihi ya, ha lakwuuru nna ha.
Mgbe ezinụlọ Jekọb richara nri ahụ ha zụtara, Jekọb zigara ụmụ ya Ijipt ọzọ. Na nke ugbu a, ha na nwanne ha ikpeazụ aha ya bụ Benjamin so. Josef lere ụmụnne ya ule. Otú o si mee ya bụ na o tinyere iko ọlaọcha ya n’akpa Benjamin ma kwuo na ụmụnne ya zuuru ya. Mgbe ndị na-ejere Josef ozi hụrụ iko ahụ n’akpa Benjamin, o juru ụmụnne ya anya. Ha rịọrọ Josef ka ọ taa hanwa ahụhụ ọ ga-ata Benjamin
Ugbu a, o doola Josef anya na ụmụnne ya agbanweela. O nwekwaghị ike ijide onwe ya, ya ebewe ákwá, ma kwuo, sị: ‘Abụ m nwanne unu Josef. Nna m, ọ̀ ka dị ndụ?’ Ihe a o kwuru juru ụmụnne ya ezigbo anya. Ọ gwara ha, sị: ‘Unu ewesola ibe unu iwe maka ihe unu mere m. Ọ bụ Chineke zitere m n’ebe a ka unu nwee ike ịdị ndụ. Gaanụ ozugbo kpọta nna m n’ebe a.’
Ha lawara ka ha gaa kọọrọ nna ha ihe ọma merenụ, nakwa ka ha kpọta ya n’Ijipt. Josef na nna ya emechaala biri, n’agbanyeghị na ọtụtụ afọ agaala kemgbe ahụ e rere ya.
“Ma ọ bụrụ na unu adịghị agbaghara ndị mmadụ njehie ha, Nna unu agaghịkwa na-agbaghara unu njehie unu.”​—Matiu 6:15
Ajụjụ: Olee otú Jehova si nyere Josef aka? Gịnị ka Josef mere iji gosi na ya agbagharala ụmụnne ya?
Jenesis 40:1–45:28; 46:1-7, 26-34; Abụ Ọma 105:17-19; Ọrụ Ndịozi 7:9-15
Danloduo katuun a e sere ese ma jiri ya mata banyere Josef, onye Chineke ji zọpụta otu mba.
Fero Ebulie Josef Elu
Sechapụ foto a e ji akụzi ihe, jirikwa ya mata ihe ọ ga-abụ ya mere o ji siere ụmụnne Josef ike ịmata na ọ bụ Josef.
IHE ỤMỤAKA JI AMỤ IHE
Ndị A Kọrọ Akụkọ Ha na Baịbụl Akụkọ Ha Yiri nke Josef
Danloduo ihe a e ji amụ ihe, bipụtakwa ya ma dee ebe mmadụ ise Baịbụl kọrọ akụkọ ha na akụkọ Josef yiri.
Gwam Gwam Gwam: Ònye Kwuru Ya? (Jenesis 41-50)
Danloduo ihe a e ji amụ ihe ma lee ma ị̀ ga-amatali onye kwuru nke o kwuru ma chakapụta foto ya tinye n’ebe okwu ya dị.